သူ အနှစ်သက်ဆုံး ကွင်းလယ်လူ ၆ ဦးကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ လီဗာပူး ကြယ်ပွင့် အောက်စလိတ်ချိန်ဘာလိန် - SPORTS MYANMAR
သူ အနှစ်သက်ဆုံး ကွင်းလယ်လူ ၆ ဦးကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ လီဗာပူး ကြယ်ပွင့် အောက်စလိတ်ချိန်ဘာလိန်
လီဗာပူး ကွင်းလယ်လူ အဲလက်စ် အောက်စလိတ်ချိန်ဘာလိန် ဟာ သူ အနှစ်သက်ဆုံး ကွင်းလယ်လူ ၆ ဦးကို ရွေးချယ်ပေးလိုက်ရာမှာ လက်ရှိ အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ကစားလျက် ရှိနေတဲ့ ကွင်းလယ်လူ ၄ ဦး ပါဝင် လာခဲ့ပါတယ်။ ကျန် ၂ ဦး ကတော့ လီဗာပူး ဂန္တ၀င် စတီဗင်ဂျာရတ် နဲ့ ဘာစီလိုနာ ဂန္တ၀င် အင်နီယေစတာ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၆ နှစ် အရွယ် ကစားသမားဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ရိုးမား အသင်းနဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဆီမီးဖိုင်နယ် ပထမအကျော့မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ဒူးဒဏ်ရာကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ရာသီလုံး နီးပါး ပြန်လည် နလန်ထမှု လုပ်ခဲ့ပြီး ရာသီကုန်ခါနီးမှာသာ ပြန်ကစား နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒဏ်ရာ မရမီက ပုံစံကောင်းကို ပြန်လည် ရရှိဖို့ အတွက် ကြိုးစား နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ အောက်စလိတ်ချိန်ဘာလိန် ဟာ ဒီရာသီ ယာဂန်ကလော့ရဲ့ လက်အောက်မှာ ပုံမှန် ကစားခွင့် မရရှိသေးဘဲ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ၁၂၁ မိနစ်သာ ကစားခွင့် ရထား ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ချိန်ဘာလိန်ဟာ အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် အသင်းရဲ့ နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေမှာတော့ နည်းပြ ဆောက်ဂိတ်ရဲ့ ရွေးချယ်မှုကို ခံခဲ့ ရပါတယ်။ အောက်စလိတန် ချိန်ဘာလိန်ဟာ မနေ့ညက အင်္ဂလန် က ဘူဂေးရီးယား ကို ၀င်ဘာလေမှာ ၄-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့တဲ့ ယူရို ခြေစစ်ပွဲစဉ်ရဲ့ ပွဲချိန် ၇၆ မိနစ်မှာ ဟယ်ရီကိန်း အစား လူစားဝင် ကစားခွင့် ရခဲ့ပါသေးတယ်။
အောက်စလိတ်ချိန်ဘာလိန်ဟာ နေရာစုံ ကစားနိုင်စွမ်း ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အာဆင်နယ် အသင်းမှာတုန်းက wing-back မှာတောင် ထူးထူးခြားခြား ကစား ခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အောက်စလိတ်ချိန်ဘာလိန် ရဲ့ စိတ်ကြိုက် နေရာကတော့ ကွင်းလယ် ဗဟိုနေရာ ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန် ကြယ်ပွင့်ဟာ သူနှစ်သက်ပြီး လေးစားတဲ့ နံပါတ် ၈ တွေကို ယခုလိုပဲ ရွေးချယ် ပေးလိုက်ပါတယ်။
ချိန်ဘာလိန် က “နံပါတ် ၈ နေရာဟာ လီဗာပူး နဲ့ အင်္ဂလန်မှာ ကျွန်တော် ခြေတွေ့ ခဲ့တဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်။ လီဗာပူးမှာ ကစားတဲ့ ပုံစံနဲ့ အင်္ဂလန် မှာ ကစားရတဲ့ ပုံစံဟာ လုံးဝ မတူပါဘူး။” လို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။
အနှစ်သက်ဆုံး ကွင်းလယ်လူ တွေက ဘယ်သူလဲ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို အောက်စလိတ်ချိန်ဘာလိန် က “ကျွန်တော် နှစ်သက်တဲ့ ကွင်းလယ်လူတွေ အများကြီးပါ။ မန်ချက်စတာစီးတီး နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲစဉ်မှာ အဲလက်စ် အောက်စလိတ်ချိန်ဘာလိန် ဟာ အရမ်း ကောင်းတဲ့ ဂိုးကို သွင်းယူ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီဗီဒီယို ကလစ်ကို အကြိမ်များစွာ ကြည့်ဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။
ဟန်ဒါဆန်ဟာ လက်ရှိ လီဗာပူး အသင်းမှာ တိုက်စစ်ကို ပိုမို လိုက်ပါ ကစားရတဲ့ နေရာမှာ ကစားနေပါတယ်။ သူဟာ ဒီနေရာမှာ အကောင်းဆုံး ကစား နေပါတယ်။ သူဟာ အသင်းကို ကွဲပြားတဲ့ နောက်ထပ် ပုံစံတစ်မျိုး ၊ ပိုမို အားထုတ်ကစားတဲ့ ပုံစံနဲ့ အကျိုး ပြုနေပါတယ်။
အန်ဒရီရက် အင်နီယေစတာ ကတော့ နံပါတ် ၈ နေရာကနေ ဘောလုံး ကိုင်ကစားတာ ၊ ပြေးလွှားတာ ၊ ဘောလုံး ပေးပို့မှုတွေ လုပ်တာ နဲ့ ဂိုးသွင်းတာတွေပါ လုပ်နိုင်တဲ့ သမိုင်းဝင် ကစားသမားပါ။ စတီဗင်ဂျာရတ် ကလည်း ကျွန်တော့် စံပြ ကွင်းလယ်လူ ဖြစ်ခဲ့ပြီး သူ့ကို ကြည့်ပြီး ကြီးပျင်းလာ ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကယ်ဗင်ဒီဘရိုင်းဟာ ဒီနေရာမှာ အရမ်း အရမ်း ကောင်းအောင် ကစားပြ နေပါတယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်တော် မေဆင်မောင့် လုပ်ပြ နေတာတွေကိုလည်း တကယ် နှစ်သက် ပါတယ်။ ရို့စ်ဘာကလေ ကလည်း အကောင်း လုပ်နိုင်တဲ့ သူ ဖြစ်ပါတယ်။” လို့ ဆိုသွားပါတယ်။
အောက်စလိတ် ချိန်ဘာလိန်ဟာ အာဆင်နယ်မှ လီဗာပူး အသင်းကို ပြောင်းရွေ့ လာခဲ့ပြီးနောက် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား နဲ့ ယူအီးအက်ဖ်အေ စူပါဖလား တို့ကို ဆွတ်ခူး ထားခဲ့ပြီး ဖြစ်ကာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကလပ် စံချိန်တင် ရမှတ် ၉၇ မှတ်ထိ ရခဲ့တဲ့ ယာဂန်ကလော့ရဲ့ အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာလည်း ပရီးမီးယားလိဂ် ၄ ပွဲကစား ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲနဲ့အတူ အားကောင်းမောင်းသန် ခရီးဆက် နေပါတယ်။
သူ အနှဈသကျဆုံး ကှငျးလယျလူ ၆ ဦးကို ရှေးခယျြပေးလျိုကျတဲ့ လီဗာပူး ကွယျပှငျ့ အောကျစလိတျခြိနျဘာလိနျ
လီဗာပူး ကှငျးလယျလူ အဲလကျဈ အောကျစလိတျခြိနျဘာလိနျ ဟာ သူ အနှဈသကျဆုံး ကှငျးလယျလူ ၆ ဦးကို ရှေးခယျြပေးလိုကျရာမှာ လကျရှိ အင်ျဂလနျ ပရီးမီးယားလိဂျ မှာ ကစားလကျြ ရှိနတေဲ့ ကှငျးလယျလူ ၄ ဦး ပါဝငျ လာခဲ့ပါတယျ။ ကနျြ ၂ ဦး ကတော့ လီဗာပူး ဂန်တဝငျ စတီဗငျဂြာရတျ နဲ့ ဘာစီလိုနာ ဂန်တဝငျ အငျနီယစေတာ တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၂၆ နှဈ အရှယျ ကစားသမားဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈက ရိုးမား အသငျးနဲ့ ကစား ခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ဆီမီးဖိုငျနယျ ပထမအကြော့မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ ဒူးဒဏျရာကွောငျ့ ပွီးခဲ့တဲ့ တဈရာသီလုံး နီးပါး ပွနျလညျ နလနျထမှု လုပျခဲ့ပွီး ရာသီကုနျခါနီးမှာသာ ပွနျကစား နိုငျခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒဏျရာ မရမီက ပုံစံကောငျးကို ပွနျလညျ ရရှိဖို့ အတှကျ ကွိုးစား နဆေဲ ဖွဈတဲ့ အောကျစလိတျခြိနျဘာလိနျ ဟာ ဒီရာသီ ယာဂနျကလော့ရဲ့ လကျအောကျမှာ ပုံမှနျ ကစားခှငျ့ မရရှိသေးဘဲ ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ၁၂၁ မိနဈသာ ကစားခှငျ့ ရထား ခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ခြိနျဘာလိနျဟာ အင်ျဂလနျ လကျရှေးစငျ အသငျးရဲ့ နိုငျငံတကာပှဲစဉျတှမှောတော့ နညျးပွ ဆောကျဂိတျရဲ့ ရှေးခယျြမှုကို ခံခဲ့ ရပါတယျ။ အောကျစလိတနျ ခြိနျဘာလိနျဟာ မနညေ့က အင်ျဂလနျ က ဘူဂေးရီးယား ကို ၀ငျဘာလမှော ၄-၀ နဲ့ အနိုငျ ရရှိခဲ့တဲ့ ယူရို ခွစေဈပှဲစဉျရဲ့ ပှဲခြိနျ ရ၆ မိနဈမှာ ဟယျရီကိနျး အစား လူစားဝငျ ကစားခှငျ့ ရခဲ့ပါသေးတယျ။
အောကျစလိတျခြိနျဘာလိနျဟာ နရောစုံ ကစားနိုငျစှမျး ရှိသူ တဈဦးဖွဈပွီး အာဆငျနယျ အသငျးမှာတုနျးက wing-back မှာတောငျ ထူးထူးခွားခွား ကစား ခဲ့ရပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အောကျစလိတျခြိနျဘာလိနျ ရဲ့ စိတျကွိုကျ နရောကတော့ ကှငျးလယျ ဗဟိုနရော ဖွဈပွီး အင်ျဂလနျ ကွယျပှငျ့ဟာ သူနှဈသကျပွီး လေးစားတဲ့ နံပါတျ ၈ တှကေို ယခုလိုပဲ ရှေးခယျြ ပေးလိုကျပါတယျ။
ခြိနျဘာလိနျ က “နံပါတျ ၈ နရောဟာ လီဗာပူး နဲ့ အင်ျဂလနျမှာ ကြှနျတျော ခွတှေေ့ ခဲ့တဲ့ နရောဖွဈပါတယျ။ လီဗာပူးမှာ ကစားတဲ့ ပုံစံနဲ့ အင်ျဂလနျ မှာ ကစားရတဲ့ ပုံစံဟာ လုံးဝ မတူပါဘူး။” လို့ ဆိုလိုကျပါတယျ။
အနှဈသကျဆုံး ကှငျးလယျလူ တှကေ ဘယျသူလဲ? ဆိုတဲ့ မေးခှနျးကို အောကျစလိတျခြိနျဘာလိနျ က “ကြှနျတျော နှဈသကျတဲ့ ကှငျးလယျလူတှေ အမြားကွီးပါ။ မနျခကျြစတာစီးတီး နဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ ပှဲစဉျမှာ အဲလကျဈ အောကျစလိတျခြိနျဘာလိနျ ဟာ အရမျး ကောငျးတဲ့ ဂိုးကို သှငျးယူ နျိုငျခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတျော ဒီဗီဒီယို ကလဈကို အကွိမျမြားစှာ ကွညျ့ဖွဈ ခဲ့ပါတယျ။
ဟနျဒါဆနျဟာ လကျရှိ လီဗာပူး အသငျးမှာ တိုကျစဈကို ပိုမို လိုကျပါ ကစားရတဲ့ နရောမှာ ကစားနပေါတယျ။ သူဟာ ဒီနရောမှာ အကောငျးဆုံး ကစား နပေါတယျ။ သူဟာ အသငျးကို ကှဲပွားတဲ့ နောကျထပျ ပုံစံတဈျမြိုး ၊ ပိုမို အားထုတျကစားတဲ့ ပုံစံနဲ့ အကြိုး ပွုနပေါတယျ။
အနျဒရီရကျ အငျနီယစေတာ ကတော့ နံပါတျ ၈ နရောကနေ ဘောလုံး ကိုငျကစားတာ ၊ ပွေးလှားတာ ၊ ဘောလုံး ပေးပို့မှုတှေ လုပျတာ နဲ့ ဂိုးသှငျးတာတှပေါ လုပျနိုငျတဲ့ သမိုငျးဝငျ ကစားသမားပါ။ စတီဗငျဂြာရတျ ကလညျး ကြှနျတေျာ့ စံပွ ကှငျးလယျလူ ဖွဈခဲ့ပွီး သူ့ကို ကွညျ့ပွီး ကွီးပငျြးလာ ခဲ့တာပါ။ ဒါပမေယျ့ ကယျဗငျဒီဘရိုငျးဟာ ဒီနရောမှာ အရမျး အရမျး ကောငျးအောငျ ကစားပွ နပေါတယျ။
ပွီးတော့ ကြှနျတျော မဆေငျမောငျ့ လုပျပွ နတောတှကေိုလညျး တကယျ နှဈသကျ ပါတယျ။ ရို့ဈဘာကလေ ကလညျး အကောငျး လုပျနိုငျတဲ့ သူ ဖွဈပါတယျ။” လို့ ဆိုသှားပါတယျ။
အောကျစလိတျ ခြိနျဘာလိနျဟာ အာဆငျနယျမှ လီဗာပူး အသငျးကို ပွောငျးရှေ့ လာခဲ့ပွီးနောကျ ခနျြပီယံလိဂျဖလား နဲ့ ယူအီးအကျဖျအေ စူပါဖလား တို့ကို ဆှတျခူး ထားခဲ့ပွီး ဖွဈကာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကလပျ စံခြိနျတငျ ရမှတျ ၉၇ မှတျထိ ရခဲ့တဲ့ ယာဂနျကလော့ရဲ့ အသငျးဟာ ဒီရာသီမှာလညျး ပရီးမီးယားလိဂျ ၄ ပှဲကစား ရာနှုနျးပွညျ့ နိုငျပှဲနဲ့အတူ အားကောငျးမောငျးသနျ ခရီးဆကျ နပေါတယျ။